Sebenzisa i-Twitter ukuFumana ukuKhokela | Martech Zone
NgoMvulo, Aprili 27, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Olona phawu lubalaseleyo lwe- Twitter njengesixhobo sonxibelelwano kukuba kunjalo Imvume-esekwe. Awudingi ukundilandela kwaye akukho mfuneko yokuba ndikulandele… akukho kubambana ngezandla, akukho kuvunywa, akukho longenelelo luyimfuneko. Ukuba, ngasizathu sithile, ndiyakuthuka okanye ndikugxekile… okanye umane udinwa zii-tweets zam, unokungalandeli. Akukho mntu uziva enzakele- akukho monakalo, akukho siphoso.
Kule nyanga, Iivenkile zomkhosi waselwandle Uya kudubula abasebenzisi be-1,000 abadlulileyo kwi-intanethi. Le yindawo yenethiwekhi yabalindi abangabanini bayo nabaqhutywa ngamagqala. Xa ingeniso iqala ukugqitha inkcitho kunye neendleko zokuqalisa ukubuyiselwa, sijonge phambili ekwenzeni iNavyVets.com ibe yishishini elingenzi nzuzo- nayo yonke ingeniso ibuyiselwa kwiiVeterans 'Charity.
Ukugcina iindleko ziphantsi, ndenze uhlahlo-lwabiwo mali oluncinci kakhulu kwintengiso-nganye-yokuthengisa kunye nokukhuthaza indawo ngokufanelekileyo.
Phezolo ndenze into eyahlukileyo kancinci, ndongeze a I-NavyVets iTwitter akhawunti, yongeza ukondla komsebenzi kwiakhawunti ye-Twitter usebenzisa Twitterfeed, ke ngoku ukhangele kwaye walandela amaVeterans oMkhosi woMkhosi kuTwitter!
Ngumsebenzi othatha ixesha, kodwa emva kwexesha elithile ndafumana ndalandela malunga ne-40 Umkhosi wamanzi kwi-Twitter. Oku kubathumela umyalezo ngolwazi lwam ukuze bajonge iprofayili yeeVets. Uninzi lwabantu endilulandelayo lwajika, lwandwendwela uthungelwano lweVets Navy, kwaye lafaka isicelo sobulungu! Ayisiyondlela ilula yokufumana isikhokelo, kodwa yayisebenza kwaye ayicaphukisanga mntu ke ndiyakholelwa ukuba yimpumelelo!
Ezinye izixhobo ezongezelelweyo ze-Twitter
I-imeyile oyifumanayo xa umntu ekulandela kwi-Twitter ngamathambo amahle. Umntu othile kuTwitter undijikele kwiTwimailer. Ubeka idilesi ye-imeyile yakho ye-Twitter endaweni yedilesi ye-imeyile ye-Twimailer kunye ne-voila! Jonga umfanekiso ngasekunene. Ufumana ii-imeyile ezinolwazi kakhulu ngefoto, ulwazi ngeprofayili, ii-tweets zamva nje, kunye nonxibelelwano olukhawulezayo lokulandela, ukuvimba okanye ukunika ingxelo umsebenzisi we-SPAM.
Kuba ii-tweets zikawonke-wonke ziyafikeleleka ngokukhangela, kubonakala ngathi le yindlela entle kakhulu yamashishini- hayi nje phendula kubathengi -Kodwa ukunxibelelana ngokuthe ngqo nakumathemba!
Ngaba unayo imveliso okanye inkonzo onqwenela ukuyinyusa? Abanye izixhobo ze-Twitter Uya kuphendula ukuba amagama aphambili akhankanyiwe kwaye / okanye indawo ethile ichaziwe. Ndicinga ukuba oku kunokuba yinto engathandekiyo- enkosi banikezela ngenkqubo yokuphuma. Ndizamile i-Tweetlater okwethutyana umva, kodwa kwaba lilize. Ukulandela nje iakhawunti ye-twitter yindlela entle, ethe cwaka ukugxeka iakhawunti kukujonga.
Olu lwazi lweedatha kwaye yindlela eyaziwayo ngokufanelekileyo yokufumana izikhokelo kwimithombo yedatha. Ukudibanisa i-Twitter kunokuba yindlela elungileyo yokufumana izikhokelo ezitsha kwi-Twitter namhlanje!
Ii-URLs ezilula kwiSiza sakho nge .htaccess
Epreli 28, 2009 ngo-6: 15 PM
Ngaba ucinga ukuba elo xesha lokukhangela lalifanele wena, Doug? Ngaba ucinga ukuba "umphandi we-Twitter" angaze abe sisikhundla esihlawulelwayo?
Ndingaba nomdla wokwazi iziphumo ezivela kweli phulo leNavy.
Epreli 28, 2009 ngo-8: 37 PM
I-NavyVets ayizukufumana ngeniso kwaye ngumsebenzi wothando kum-ndifuna ukuba nendawo yeVeterans enakekela iiVeterans endaweni yokubaxhaphaza ngengeniso yentengiso. Ke andiqinisekanga ngenene ngexabiso lokubeka kuyo! Ndiqinisekile umntu uza kuhlawula olu hlobo lomsebenzi!